Abaxhasi beenkonzo kunye neFektri | Abavelisi beeNkonzo zase China
I-Dongguan Enuo Mold Co., Ltd.yinkampani ye-Hong Kong BHD Group, i-plastic mold mold kunye nokuvelisa yinkampani yabo ephambili. Ngaphaya koko, iinxalenye zentsimbi i-CNC machining, iimveliso zohlobo lwe-R & D, indawo yokuhlola / iR Gauge yeR & D, iimveliso zeplastikhi zokubumba, ukutshiza kunye nendibano nayo iyabandakanyeka.
Sinikezela uluhlu olubanzi lweenkonzo zokuyila
Enuo ngumngundo inokubonelela abathengi ngeenkonzo zokumisa ezizodwa zokuyilwa kwamalungu esinyithi, imveliso kunye nonyango lomphezulu. Inkampani iqokelele amava atyebileyo ekuqhubeni izinto zentsimbi kunye namatyala onyango ngaphezulu kweminyaka emininzi. Inkampani inezixhobo zokulungisa ezi-high-precision ezivela kwilizwe nakwamanye amazwe (iSodick CNC, i-EDM), kunye ne-Si Rui PC-system CMM izixhobo zokulinganisa ukubonelela abathengingqo CNC iindawo yokugaya ...
Enuo ngumngundoibonelele ngokulinganisa i-Gauge, indawo yokuxhasa i-CMM kunye nemidlalo yendibano yokuhlangana iminyaka emininzi yokuvelisa umngundo kunye nentengiso. Ubungakanani beejigs zokuhlola zigubungela izembozo zemoto kunye neendawo zangaphakathi / zangaphandle zokuhombisa.Inaliti iinxalenye otyhidiweyo,Ukukhanya okuzenzekelayo kunye neentsimbi zokunyathela. Iqela le-Enuo lithembele kwiqela lokusebenza ngokukuko, ukuqhuba kakuhle / izixhobo zokulinganisa kunye nomgangatho ozinzileyo wokubonelela ngokuqhubekayo ...
Enuo ngumngundo ishishini ephambili uyilo sokubumbela zeplastiki kunye nokuvelisa, indawo yethu yokutyala ye-2,000 yeemitha zesikwere, eyayixhonywe ngocoselelo amaziko machining e-CNC, i-EDM yintlantsi umatshini, oomatshini bokugaya, oomatshini bokugaya, ukuvavanya kunye nezinye izixhobo ngokupheleleyo ngaphezulu kweeseti ezingama-30, kunye namaqela amathathu endibano yokubumba ifakiwe. I-crane yokusebenzela isindululo sokuphakamisa ubunzima beetoni ezili-15, kunye nesiphumo sonyaka seeseti ezili-100, kunye nobunzima obukhulu bomngundo ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-30.
Enuo ngumngundoishishini ephambili uyilo sokubumbela zeplastiki kunye nokuvelisa, indawo yethu yokutyala ye-2,000 yeemitha zesikwere, eyayixhonywe ngocoselelo amaziko machining e-CNC, i-EDM yintlantsi umatshini, oomatshini bokugaya, oomatshini bokugaya, ukuvavanya kunye nezinye izixhobo ngokupheleleyo ngaphezulu kweeseti ezingama-30, kunye namaqela amathathu endibano yokubumba ifakiwe. I-crane yokusebenzela isindululo sokuphakamisa ubunzima beetoni ezili-15, kunye nesiphumo sonyaka seeseti ezili-100, kunye nobunzima obukhulu bomngundo ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-30.
I-Enuo mold isebenzisa ukushicilela kwe-3D okanye iteknoloji yokubumba i-silicone ukubonelela abathengi ngeenkonzo zokumisa enye ezifana nokuphuhliswa kwemveliso ngokukhawuleza, ukuveliswa kwemodeli ngokukhawuleza, ukusetyenziswa kwezixhobo ngokukhawuleza kunye nokuveliswa kwemveliso. SebenzisaIPro / E, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD kunye nezinye isoftware kwiimveliso zangaphakathi zokwenza ubume, uyilo, njl., Ukubonelela abathengi ngesiseko esithembakeleyo sophuhliso lwemveliso entsha, ukuvavanywa kweemarike, ukuthengisa umboniso kunye nokuvelisa ukungunda.